Tag: Balcad | Sagal Radio Services
Ciidamada AMISOM oo dad rayid ah ku dilay degmada Balcad
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan AMISOM ay dad rayid ah ku dileen degmadaas.
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay deegaano ka tirsam degmadaas laga maqlay jug culus oo loo maleynayo inay aheyd duqeyn.
Dagaal Beeleed Ka Dhacay Deegaanno Hoostaga Degmada Balcad Ee Sh/dhexe
Wararka ka imaanaya gobolka Shabellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in dagaal u abaabulan qaab beeleed uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Raqeyle Buur-dheere oo kamid ah deegaannada hoostaga degmada Balcad ee gobolkaasi, kaasi oo khasaare kala duwan geystay.
Tuulada Duduble oo ay biyo qaadeen iyo wabiga oo qarka u saaran inuu ku fataho Jowhar(Sawiro)
Qoysas tiradoodu gaaraya 930 qoys ayaa ka barakacay deegaanka Duduble oo ka tirsan degmada Mahaday kadib markii wabiga uu fatahay deegaankaas.
Saraakiil Ciidan oo gaaray Balcad iyo Guddoomiyaha degmadaas oo Maqan
Saraakiisha ciidanka dowladda Somalia ayaa xalay gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada gaar ah oo taageersan guddoomiyihii degmadaas oo ka baxaday degmada iyo ciidammo ka tirsan booliiska iyo nabadsugidda dowladda.
Diyaarada Qaad sidday oo Shil ku Gashay Garoonka Diyaaradaha Guriceel
Diyaarad qaad sidday ayaa saaka shil ku gashay garoonka diyaaradaha degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, kaddib markii ay ka baxday waddada ay diyaaraduhu ku cararaan.